एनआरएनए ले कोरोना भाइरससंग लड्न नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने – Newslines Nepal
एनआरएनए ले कोरोना भाइरससंग लड्न नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने
प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०७६, बुधबार १७:४३
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले कोरोना भाइरससंग लड्न नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको आग्रहमा कोरनोना विरुद्ध जुध्न घोषणा गरेको रू १ करोड सहयोगबाट सरकारलाई उक्त स्वास्थ्य सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने विशेष प्रकारको सुरक्षा उपकरण र परीक्षण किट गैरआवासीय नेपाली संघले चीनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध गराउने भएको संघले जनाएको छ।
पन्तले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्राउन पहल गरिदिने मन्त्री ज्ञवाली र नेपाल सरकारलाई गैरआवासीय नेपाली समुदायका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिएका छन् ।
यसो भन्छन अध्यक्ष कुमार पन्त
गैरआवासीय नेपाली संघ (#NRNA)ले सरकारलाई #COVID19 विरुद्ध जुध्न घोषणा गरेको रू १ करोड सहयोग मा. परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको आग्रहअनुसार स्वास्थ्य सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराइँदैछ । स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने विशेष प्रकारको सुरक्षा उपकरण (#PPE) र परीक्षण किट हामीले चीनस्थित नेपाली दूतावासमा उपलब्ध गराउनेछौँ।
ती सामग्री चीनबाट ल्याउने बन्दोबस्त सरकारले गर्ने समझदारी बनेको छ। यसका निम्ति मा. मन्त्री ज्ञवाली र नेपाल सरकारलाई गैरआवासीय नेपाली समुदायका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद । विश्वभर फैलिएको संकटको प्रतिरोधमा हामी एकसाथ छौँ । आशा गरौँ, यस युद्धमा हामी चाँडै विजयी बन्नेछौँ